Abenzi basechina abaMnyama abarhabaxa i-Disc-B322 kunye nabathengisi Xieyanshi
Inombolo: Iphepha le-sanding igama leBrand: XYS
Umzekelo No .: B322 Grit range: P60-p1000
Uhlobo: I-disc ejikelezayo okanye ubungakanani beRoll: 5 "6" (ubukhulu)
Ukuxhaswa: i-hook kunye ne-loop / i-PSA Hole: 0H, 6H, 7H, 9H, 15H, 17H
Ukusetyenziswa: intsimbi ipolishi kunye nombala weenkuni: mhlophe
Amanye amagama: Materical: Aluminium oxide hs khowudi: 6805200000
Isicelo: Izithuthi Zolwandle Aerospace Wood Metal
Umba Iphepha lediski yediski
Igama lebrand XYS
Umzekelo No. B322
Uluhlu lwegrit P60-p1000
Chwetheza I-disc ejikelezayo okanye iRoll
Ubungakanani 5 ”6” (ubukhulu)
Ukuxhaswa umlobothi wakho, loop / PSA
Imingxunya 0H, 6H, 7H, 9H, 15H, 17H
Ukusetyenziswa ipolishi yentsimbi kunye neenkuni
Materical Aluminium oksayidi
Ikhowudi ye-Hs 6805200000
Ukusetyenziswa Izithuthi Zolwandle Aerospace Wood Metal
Isinyithi esifana ne-aluminium, intsimbi yekhabhoni, iinkuni ezinje ngomthi othambileyo okanye umthi onzima ... I-B322 disc sanding inokusebenza nge-sander ngomsebenzi othile wokugqiba, njengokulungiselela / ukulungisa, isanti ye-orbital, ukulungiselela isinyithi ngaphambi kwepeyinti.
I-B322 iguqula umgangatho ophezulu we-aluminium oxide yamaminerali, eqinile, kunye nokuqinisekisa ukusika okukhawulezayo.
Ukwaleka kukwakhiwa kwengubo evulekileyo, njengoko kukho izithuba phakathi kweenkozo ezirhabaxa, kuthintelwa ukuphazamiseka kothuli, olunokwandisa ubomi oburhabaxa kakhulu.
Idiski ye-B322 ye-sanding kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye uqhoboshele kwisanders, ibhloko yesanti, njl.
✅60-PIECE MULTI-GRIT SANDPAPAER SET
Iseti yeediski zethu zokubonelela inikezela nge-sandpaper eninzi yegrit oyifunayo. Uya kufumana i-60 iyonke ye-orbital sander pads yamanqanaba ama-6 ahlukeneyo kubandakanya i-40/60/80/120/180 / 320Grit. Okukhona liphezulu inani, kokukhona i-grit iyagcwala
UKWAKHIWA KOMGANGATHO OPHAKAMILEYO
Iipleyiti zethu ze-sanding zenziwe kumgangatho ophezulu we-aluminium oxide esirhabaxa, eqinile kwaye ichasene nokuxinana. Ingqolowa yealuminium oxide ihambisa ukusika okukhawulezayo kunye nokugqitywa okuthe tyaba kwiprojekthi yakho.
✅ INKULUMBUSO YABUYELA EMVA NEEMINGO ESI-8
Ukubuyela umva kokubamba kwenza ukususwa kwegrit kunye nokutshintshwa ngokukhawuleza kwaye kwandise ubomi kwidiski nganye, imingxunya eyi-8 yenzelwe ukukhutshwa kothuli ngokufanelekileyo
Iidiski zethu ezingama-intshi ezi-5 (125mm) zilingana kakuhle kwi-orbital sander, enje nge-BLACK + DECKER, DEWALT, Bosch, Makita, PORTER-CABLE, njl.
Iidiski zakho ezintsha zentsimbi yesanti zilungele ukusila kunye nokugqiba ngesinyithi kunye non-isinyithi, iinkuni, irabha, isikhumba, iplastiki, ilitye, iglasi kunye nezinye izinto
Egqithileyo Ihowuliseyili yeGreyidi yesiXhobo seFilimu esiSirhabaxa se-Disc -L911
Okulandelayo: Iphepha leSanding Disc Hole iphepha leSandling lokuCoca iMoto kunye neMetal -A720T
Emanzi neyomileyo esirhabaxa wokucoca Sandpaper Sandin ...